China Yepamusoro Yemvura Isina Mvura 100% Yakatetepa Windbreaker Isina Mvura Isina Mhepo Yejacket Kukwirisa Sutu Mucheka Jekiseni uye Mutengesi Wenchang
Yakakwira Hunhu Isina Mvura 100% Yakatetepa Windbreaker Isina Mvura Isina Mhepo Jekete Kukwira Sutu Mucheka
Item Kwete: KWS21-1021
Zvinyorwa: 100% Polyester
Hunhu: Antibacterial / Yakakwira Ruvara Kurumidza / Kufefetera / Kunyorova Absorption / Kurumidza Kuoma / Inonyaradza / Inofema / Inokurumidza Dry / Windproof / Isina mvura / Anti-UV
ZvemaJaketi / mbatya dzeMakomo / Windproof / mbatya
CHIKAMU CHEMAHARA Mabhachi FABRIC
Chinhu icho kwete KWS21-1021
Mashoko 100% Polyester
Shandisa Nguo / mbatya / Mabhachi / mbatya dzekukwira mugomo
Kukanganisa kwemachira ejacket
Kupfeka zvinopfuura 1.300 kunorema uye zvishoma kusanzwisisika
2. Inopisa zvakanyanya kupfeka, uye inotonhorera kana ichibviswa, izvo zvisina kukodzera kupfeka kwemazuva ese.
Zvinowanzoitika matambudziko ejaketi machira:
Ndeipi machira tekinoroji yemajacket ese
GORE-TEX zvakare ine CONDUIT, OMNI TECH, Memo-Tex, POWER-TEX, HYDRO-DRY, WEATHERTITE, nezvimwewo Hunhu hunhu hwemachira aya hauna mvura uye hunofema, tisingataure zvinofinha mashandiro e data, maererano nekushandisa, yavo kuita hakusi mutsauko mukuru
Rudzii rwejira risingapinde mvura uye rinofema nemabhachi?
Basa rejaketi nderekudzivirira mhepo nemvura, saka bhachi pacharo rinofanirwa kunge riine basa risingapinde mvura. Uye zvakare, Windbreaker Waterproof Windproof nekuti bhachi rakagadzirirwa kupfeka kwemazuva ese, nepo ichisangana isina mvura, kufema kunokoshawo zvakanyanya. Saka isu tinogona kutsanangura bhachi se: jira harina mvura uye rinofema, uye matanda anonamirwa.
Ndeipi isina mvura uye inofema indekisi yeJaketi?
Hunhu hwemhando iyi yehembe ndewekuti nhete yezvinhu zvisina mvura uye zvinofema zvinoshanda zvakasanganiswa pamucheka wechigadziko. Zvinhu zvinoshanda zvine maitiro maviri anoshanda. Imwe haina mvura, iyo inowanzo kumiririrwa neMM ikholamu yemvura. Chiyero cheGORE-TEX zvinhu ndeye 20000MM ikholamu yemvura, zvinoreva kuti kana iwe ukaisa 20M ikholamu yemvura pamucheka, panenge pasisina seepage yemvura.
Pashure: Spandex Jacquard Yakarukwa Yakakwirira Inotambanudza Elasticity Inofema Mucheka WeYoga Cloth
Zvadaro: Soft Yakadzokororwa Polyester RPET Pet Mesh Milky Jersey Mucheka Wakagadzirwa Kubva Wakagadziriswazve Mabhodhoro ePurasitiki eT-sheti Sportswear
Mucheka wekupfekedza machira